Nezve Yurie BSF - Kutanga KwemaMaggot Yekutanga Kwepasi
Nezvedu - Newe Yurie BSF ndiyo chete yeyo iyo akapayona nyika inoshushikana yemazuva ano BSF maggot. Purogiramu ye10 iri nani Yurie BSF semoto unobudirira wekushanda kweBFF yemazuva ano pasina kunhuwa. Isu tinokudziridza mhando dzisina ruvara dzomusango wevarwi vemadimbu anobhururuka zvipembenene.
Muchigadzirwa chekurima maggot pasina kushandisa zvinonhuwira
Mushonga wemombe uye
Pasina kupisa, pasina zvinodhaka uye pasina mishonga. Nezvinobudisa nhau kana substrate kunze kwekunge zviri nyore kuwanika nokuti vazhinji varipo kwose kwose uye vanowanzoregererwa.
Kunyange iyo mitatu yevhidhiyo inotanga kuva matambudziko mumamiriro ezvinhu ari tsvina, tsvina uye inonhuwa. Kubudirira kwatakaita nevevatori venhau vatatu nechinangwa chekuchengetedza kuitira kuti varimi vagone kufarira mamwe maitiro nokuti zvigadzirwa zviri nyore kusununguka.
Izvo zvakare kuratidzwa kweHurie BSF kunetseka pamusoro pezvinetso zvemarara, tsvina nemadziya emvura muIndonesia. Tariro yedu ndeyokuti nzira iyi yekunakisa maggot inogona kunge iri mhinduro imwe chete isu tose kuti tigadzire Indonesi yakachena.
Chiono chedu uye chinangwa chinoratidzwa zvakajeka muchirevo chedu, Kurumbidzwa uye KUCHENGA MY INDONESIAN. Nekushandiswa kwemajeri asina kunaka, zvinotarisirwa kuti hove, huku uye varimi vezvipembenene vachazviriritira mukupa zvokudya, zvokudya zvinowedzera muzvibereko uye zvakanyanya mumapuroteni uye chete zvinodhura zvakapoteredza Rp2.500-Rp3.100 pamakirini emhuka.
Nezvo zvakaderera zvinodhura, zvinotarisirwa kuti varimi vanogona kuva netariro yakawanda yekukura nekuwedzera zvipfuwo zvavo. Nokuti kusvika pari pano pane maitiro akawanda evarimi avo vakazoputsika nokuti havana kukwanisa kupa mari yekupa mhuka dzavo zvokudya.
Zvokudya zvezvipfuwo ndezvokubhadhara mari inogona kusvika ku70%. Izvi zvichiri kuverenga pamapepa. Vaya vakangotanga izvi mari inogona kuwedzera kusvika ku80%.
Izvi ndezvekukuvadza zvikuru nokuti:
kuchinja kwekutengesa mitengo uye
zvimwe zvinhu zvinofanirawo kuverengwa.
Kugadzira maggot ndiyo nhaka yevanhu veIndonesia vakapiwa kwatiri. Kungotarisa kubva kare kare vakanyevera kuti kubudirira kwemombe kunoda zvokudya zvezvisikwa uye mamwe maitiro emagetsi.
Uyu mharidzo inonyatsonyorwa mubhuku rimwe nerimwe rakadhindwa pane chitsauko chekupa zvokudya chinotengeswa mumabhuku ezvitoro. Takarongedzwa nemabhuku aripo atakagadzirisa kubva kumagadziro ekugadzira magotti kuva nzira yemazuva ano yekushisa BSF isina kunaka.
Mazuva ano BSF nzira dzokurimisa pasina kunhuwa, kunze kwemigumisiro yakawanda uye magot-maggot inobudiswa ine utano nokuti yakachengetedzwa zvakanaka. Uyewo chengetedza kuchengeteka kwebhizimisi refu, iyo isina kunhuhwirira, yakawanda uye yakagadzirisa migumisiro.
Kunhuwa kunokonzerwa nekugadzirwa kwemagetsi kunopisa zvakanyanya mukuenderera kwebhizimisi yekupa zvokudya zvishoma. Kukura kwemasvosve asina kusvibiswa, kunze kwekuita kuti zvive zvisina kunaka kune varimi, zvinokumbirawo zvirwere zvakadai semakonzo, mapuro, nyoka uye utano kune varimi pachavo.
Hazvirevi kunhuhwirira kwekunhuhwa kunokonzerwa kuchawana kupesana kubva kumhuri, uye zvechokwadi nharaunda haigoni kuramba yakanyarara kana kusvibiswa uku kunopararira kwose kwose. Kune mienzaniso mizhinji yezviitiko mune dzimwe nzvimbo dzebhizimisi remaggot mushure mekufamba kwegore negore ipapo muchiratidziro chemunharaunda uye inofanira kuvhara.
Iyi mamiriro acho akaipa, pasina basa basa rakaoma rave richirwirwa. Saka, kubvira pakutanga, iva nechokwadi chokuti unoronga bhizinesi pasina kunhuwa. Kana iwe usati iwe uri kuronga kubhadhara kwebhizimisi.
Mukuedza kuzadzikisa zviroto zvedu RIVIRIRA UYE KUNYANYA MY INDONESIAN. Kune chirongwa chebasa re 10 chakange chakave chechimiro cheSOP (standard operation procedure) kuitira kuti kushandiswa kwebasa remaggot zuva nezuva.
Panguva ino takapararira kune anopfuura maguta e99 muIndonesia. Iwe unongosarudza nzvimbo yepedyo kwaunogara.
Nezve 10 Makomborero eYuroe BSF
1. MaMaggot akawanda anogadzira pasina kunhuwa.
Iwe unotungamirirwa kubva kune zero kuti ubudirire kubudisa maggot usina kunhuhwira, kutanga kubva kudzidza kudzidzira zvakananga muimba yekurera iwe unogona kusarudza muguta re99 muIndonesia.
Zuva rose iwe unodzidzira pakarepo unofambidzana nemumwe muongorori wega (kwete kirasi system) uye ramba uchiita nhungamiro inoshanda kumba kusvikira wapera. Ipapo Zvakanakira Kudzidza Private Odorless Maggot Zvokurima ndezvi:
Tarisa pane iwe
Iwe uchapiwa kunyatsotarisirwa nevakudzidzisi vane ruzivo kuitira kuti iwe ugone kuvimbisa kuti chinangwa chemupiiridzi uye iwe uri zvizere pane zvaunenge uchida uye unotarisira.
Iyi nzira yega yega inobvumira vaongorori kupa mhinduro dzinokurumidza panzvimbo yekutora zvidzidzo zvekirasi.
Nebhuku rekutungamirira rakapiwa uye rinogona kuverengwa kuburikidza nechikwata cheYuroe BSF mune playstore. Zvinokubvumira kuti udzidze zvakawanda wakasununguka uye une chivimbo usati waita purazi
Zvakanakisisa Kushandisa Mentor
Iwe uchadzidzira kutungamirirwa nevanokurudzira zvikuru avo vakabudirira mukurima BSF yezuva ranhasi pasina kunhuwa. Ndivanaani vanofarira kugovana zviitiko. Izvi zvinokubatsira iwe, nokuti zvinogona kuratidza kuti tsika yekukudziridza maggot kunze kwekunhuhwira mune imwe nhanho tsanangudzo.
Iyi nzira inonyatsovandudza unyanzvi hwako hwokugadzirisa matambudziko mumabasa ako ezuva nezuva kumba mushure mekunge mazadzisa tsika.
Zvakakwana Zvedzidzo Yokudzidza
Iwe uri uye unodzidza munzvimbo yakakwana uko kune nzvimbo dzakanyanya kuderedzwa.
Iyi kukura maggot inogona kuitwa kunze kwekutyisidzirwa kwema demos kubva mumhuri uye munzanga nekuti yakanyatsogadzirwa isina kunhuwa.
Kunyange vamwe vavo vanoita magadziro emagetsi mukati meimba nekushandisa kamuri remukomana.
Pano iwe unodzidziswa kunyatsogona kukura mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana uye nzvimbo dzakawanda dzine vanhu vasingatyi zviratidzo.
Kubva pane zvakaitika, chimwe chezvikonzero zvekukundikana ndeyekunyadzisa kubvunza uye zvakadaro nehurumende yega, zvinhu zvingagadziriswa. Nokuti iwe chete uye mutungamiri mavari zvose kuti iwe uwedzere kuvimba kwako mukudzidza usingatyi kana kunyara kubvunza
Kurudyi Private Mentor
Iwe unogona kusarudza mutungamiri wakanakisisa muguta re99, sarudza sarudzo ye99 yaunoda uye yakanakisisa yakakodzera zvido zvako.
Murevereri akadzidziswa anogona kupa ruzivo maererano nezvinetso zviripo mumaguta avo. izvi zvinokwanisika nokuti iwe nomudzidzisi uri munzvimbo iri pedyo kuitira kuti matambudziko emumunda chaiwo aonekwe.
Iwe unosarudza zuva uye zuva, naizvozvo hazvizopindirani nebasa rebasa kana vamwe.
Iwe une rusununguko rwokukurukurirana nokuti mubatsiri wako anonyatsonzwisisa uye anopa rubatsiro runodikanwa
2. Fomu Ichanganisa Zvokudya Gadzirira kusvika ku83%
Mushure mokunge iwe uine maggot, iwe uchaputirwa bhomba, unogona kusanganisa BSF maggot ane chimiro chakasiyana uye uchengetedze kusvika ku 83%
3. BSG Marketing Maggot
Iwe haufaniri kunge wakavhiringidzika pamusoro pekutengesa maggot. SELL BSF TO YURIE !!! Tinobvuma kutengesa magog uye tenga maggot ako Rp7.000 / kg
Kana iwe unoshingaira kutengesa maggot kuna Yurie BSF. Uyezve, takagadzirira chirongwa chekubatsira kukudziridza bhizinesi remaggot. Rubatsiro rwekutanga rweRP100.000.000 runoshandiswa kuwedzera kukwanisa kwekubudisa.
Shamwari yekubatsira inodzorerwa uye PAID iri kushandisa MAGGOT. Izvo zvakaenzana neYOUTOUT FLOWER - HASINA RIBA !!!
5. Ambassador Yurie BSF
Mukuita zuva nezuva, dzimwe nguva hazviparadzanisi kubva pane dambudziko rinogadziriswa. Pamwe chete nehurumende yeYuroe BSF, wakagadzirira kuvapo purazi rako kuti ugadzirise matambudziko anotarisana nawo.
Nhungamiro yakanyatsogadzirwa muhutano hwekuenderera mberi kwehutano hwehutano Nokuda kwechikonzero ichi purogiramu ndeyekuita kuti hutano hwemaggot akabudiswa huve hwakanaka. Nokupa ruzivo rwakawedzerwa pachikwata chepamusoro.
Kuti tive chikamu chemusika wepasi rese tiri kugadzira makambani anobatira Indonesian. Icho chichava nzvimbo yekutenga uye kutengesa munharaunda yemagunwe Yurie BSF shamwari.
Danho rinotevera nderokuva chikamu chekusimbiswa kwebhizimisi rezvematongerwo enyika uyewo kukwanise kugadzirisa zvido zvemisika yepamusha uye yepasi pose.
Isocial Social Responsibility (CSR) chirongwa chaiyo kune avo vasingakwanisi kutenga bhasiyo yezvino BSF pasina kunhuwa.
10 Kunyengetera uye kuedza
Tinofanira kunyengetera kuti imwe nhanho yatinotora inogara yakachengetedzwa na Allah SWT.
Muzvikamu zvakasiyana Yurie BSF inokurudzira zvakakwana zvokudya mumushandi wekuvandudza BSF magot. Somugumisiro Kupatsanurwa uku kunotarisa pakugadzirwa kwemhando dzakanakisisa dzemagot anoshandisa mashizha emiti yakasvibirira pamwe nekubatana nemhizha yezvokudya uye makambani anozivikanwa muIndonesia uye pasi. Yurie BSF inotanga mikana yekushandira pamwe nemapoka akawanda kuti arambe achikudziridza kugadzirwa nekutsvaga magog.
Kana iwe uchida kufarira taura nesu.